Daihatsu Hijet 2013 (#730053) ကို Hlaing ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရာင... | CarsDB
Lot Number: #730053
Ko Naing Win
DAIHATSU. HI JET. 2013
Auto gear. Power streeing
Air con. ခေါင်းမှီ အကြီး
လိုင်စင်သက်တမ်း 2022.5လပိုင်း
7P /6_ _ _ ( MDY )
ဆိုစျေး = 165 သိန်း ,Good Condition,Price is negotiable. ***CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Ko Naing Win မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Daihatsu Hijet 2013 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။